प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न– जनतामा जान्छु भन्दा तिमीलेनै चलाऊ भन्न मिल्छ ? - समय-समाचार
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न– जनतामा जान्छु भन्दा तिमीलेनै चलाऊ भन्न मिल्छ ?
१० पुष २०७७, शुक्रबार १४:१८
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको सुनुवाइ जारी रहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र बहसकर्ता वकीलहरुबीच रोचक सवाल जवाफ चलिरहेका छन् ।
रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने वकीलहरुले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत नहुने बताएपछि प्रधानन्यायाधीशले विघटनको व्यवस्था संविधानमै रहेको बताएका छन् ।
इजलासमा बहस सुन्दै गर्दा तत्कालै प्रष्ट हुन खोजेका प्रधानन्यायाधीशले भने– संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था छ । तर त्यसको माध्यम के हो ? यसबारेमा बहस गरौं । यसबारेमा कुरा आवस् ।
अर्को एक प्रसंगमा प्रधानन्याधीश राणाले प्रधानमन्त्रीले ‘अब म सरकार चलाउँदिनँ’ भनेर जनतामा जान्छु भन्दा उसैलाई तिमीलेनै सरकार चलाउ भन्न मिल्छ ? भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् ।
राणाले भने– संविधानमा संसद विघटनको सिद्धान्त राखिएको छ । २०४७ सालको संविधानमा पनि थियो । माध्यम के हो त्यो भन्नुस् । निर्वाचन भएर संविधानको धfरा ७६ को उपधारा १ बमोजिम सरकार गठन भयो । अब म जनतामा जान्छु भन्यो भने तिमीलेनै अनिवार्य सरकार चलाउ भन्ने हो र ?